Igumbi lika-LiLi 1 - Ikhishi - I-Airbnb
Igumbi lika-LiLi 1 - Ikhishi
Amakamelo asanda kulungiswa esitayela sasentshonalanga anekhishi. Ibanga elifushane lokuhamba ukuya edolobhaneni elihlanganisa ulwandle, izitolo, i-7/11, izikhungo ze-dive, amahhovisi okuvakasha nokudlulisa kanye nezindawo zokudlela. Ukupaka kuyatholakala futhi esizeni. Lula uzihlole futhi uhlole.
Leli gumbi linefenisha ephelele nge-wifi, i-smart HDTV ene-NETFLIX yamahhala, nombhede onethezeke kakhulu. Umbhede wesofa nawo uyatholakala ukuze usetshenziswe. Ithala lethu libanzi futhi lilungele ukuphumula noma ukudla.
I-Kantiang Bay Village iyindawo elula kakhulu enobhishi, izindawo zokudlela, izitolo, umtholampilo wezokwelapha, izindawo zokungcebeleka zasolwandle, izikhungo zokuntywila, kanye ne-7/11 futhi yonke into isendleleni. Ungakwazi ukuzindla kalula futhi ujabulele isikhathi sakho ogwini usuku lonke. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo ngesipiliyoni sakho sokudlela okuhlanganisa ukudla kwase-Thai, kwasentshonalanga, kwamaNdiya, nokudla kwasolwandle. Nokho, ukuzizwisa okungcono kakhulu kwasebusuku kufanele kube kokuthi Why Not Bar okuhlanganisa ukudla kwasebhishi kanye nombukiso womlilo wasebusuku kanye nomculo obukhoma.
Singabantu abambalwa baseThailand naseBelgium. Singakhuluma kahle isiNgisi, isiFulentshi nesiThai. Sihlala eduze futhi singafinyelelwa ngo-24/7 nganoma yisiphi isimo esiphuthumayo.